Jasmine : December 2011
2012 ကိုကြိုဆိုဖို့ သူငယ်ချင်းများအတွက် လှလှပပ ပုံလေးများ
Posted by စံပယ်ချို | Wednesday, December 28, 2011
2011 ကိုနုတ်ဆကိခဲ့ပါတယ်ရှင် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများနဲ့ အတူ 2012 ကိုကြိုဆိုချင်တဲ့ jasmine ပါရှင်
ဒါကြောင့် online (သို့မဟုတ်) မိမိတို့ရဲ့ ဘလော့ ထဲကပဲ တူတူဆင်နွဲဖို့ ချစ်စရာကောင်းပြီးလှပတဲ့
ပုံလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်-----------အားလုံးပါတယ်နော် ဒီတစ်ခါလေ-အပျိုကြီး-လူပျိုကြီး
ဘလော့ဂါ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက် မိမိခင်မင်ရာ သူငယ်ချင်း - ချစ်သူ-မိတ်ဆွေ - လူပျိုကြီး - အပျိုကြီး - လူပျိုလေး - အပျိုလေး များအားလုံးအတွက်မိမိ နှစ်သက်ရာကိုကူးယူမျှဝေနိုင်ပါသည် ။အားလုံးကို ဖြူစင်သောသံယောဇဉ်ဖြင့် အမှန်တကယ် ခင်တဲ့ jasmine
Posted by စံပယ်ချို | Tuesday, December 27, 2011
ဒီနေ့ ၂၈-၁၂-၂၀၁၁ ကတော့ ကျွန်မ jasmine ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ကိုယ်တိုင် ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပဲ တီတင့်- Angelhlaing-အဖြူလေး-မောင်တစ်လုံး
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ မွေးနေ့မင်္ဂလာရက်မြတ်က အစပြုလို့ မွေးနေ့ရှင် မဒမ်လွင်ပြင်လေးနဲ့ အဖော်မွန်ကောင်း လွင်ပြင်လှိုင်းငယ်လေးတို့နှစ်ဦး လောကီလောကုတ္တရာ နှစ်လီနှစ်ဝ လိုအင်ဆန္ဒများပြည့်ဝပြီး သာသနာအကျိုး သည်ပိုးနိုင်တဲ့ မိသားစုလေး တစ်စုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ပါစေကွယ်။
နှလုံးသား နုနုပိုင်ဆိုင်သူ ဆောင်နတ်သမီးရေ...
မင်းအပါးမှာ ခံစားတဲ့ သက်တော်စောင့်ရဲ့ မေတ္တာတရားကြောင့်
ရေလိုအေးလို့ ပန်းလို ထာဝစဉ် လန်းဆန်းပါစေသား။ ။
(JUNEMOE ရဲ့ အတွေးလေးတစ်ပိုင်းတစ်စ) ကိုလဲအားလုံးဖတ်ရအောင်ပြန်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်
ကြည်နူး... ပျော်ရွှင်... ချမ်းမြေ့ခြင်းများ
အေးမြလင်းကြည် ရနံ့ တည်ပြီး
မွေးနေ့ အတွက် ဆုတောင်းရင်း
ထာဝရ ပျော်ရွှင်ခြင်း ရှိပါစေ
ထာဝရ ခင်မင်ခြင်း ရှိပါစေ)
(သာယာအေးမြနွေးထွေးတဲ့ ဘဝနဲ့ 
တည်ငြိမ်တဲ့အလှပိုင်ရှင်လေး မမ စံပယ်ချို ရေ
ထာဝရပျော်ရွှင်ပါစေလို့မမရဲ့မောင်လေး
မွေးနေ့ကိုလာရောက်အားပေးကြသော သူငယ်ချင်းများ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာကိတ်မုန့်များကို
နှစ်သစ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး ပျော်ရွှင်မှုအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်ဝကြပါစေလို့
ကျွန်မရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်မြောက်ဖို့ အရာအားလုံးကိုဖန်တီးပေးတာကတော့ ကျွန်မရဲ့
ထာဝရ လက်တွဲဖော်ဖြစ်တဲ့ မောင်လွင်ပြင်ပါပဲ သူကတော့ကျွန်မဘာပဲလုပ်ချင်ချင်
အားလုံးကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူပါ ဘလော့လေးကိုလဲ သူကပဲ စပြီးလုပ်ပေးခဲ့တာပါ
လုပ်ပြီးတာနဲ့( မိန်းမရေ လာရေးတော့ ကြိုက်တဲ့ ကဗျာတွေရေးလို့ရပြီတဲ့)
သူ့ကိုတော့ ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းနောက်မှပြောပါတော့မယ်စိတ်ကူးရှိပေမယ့် သူကပြောတယ်
Happy New Year အတွက် လက်ဆောင်ပုံ လှလှလေးများ
Posted by စံပယ်ချို | Monday, December 26, 2011
သူငယ်ချင်းများ မိမိချစ်ရသောသူ ခင်မင်ရသောသူ
မိမိ ချစ်မြတ်နိုးရသောသူ များကို Happy New Year အတွက်ကြိုတင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်
လူပျိုကြီးများ အပျိုကြီးများလဲ မိမိချစ်ရသောသူများကိုပေးရန် အကြံပြုပါသည်
သူငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက်ပါရှင် မိမိကြိုက်သောပုံများကို ကူးယူနိုင်ပါသည် - - -
Posted by စံပယ်ချို | Thursday, December 22, 2011
ဒီပိုစ့်လေးကတော့ ရိုစ့် ကျေးဇူးကြောင့်ရေးဖြစ်ရတာပါ -----
candy လေးကလဲထပ်ပြီး Tag ပါတယ်ရှင် အစကတော့နောက်ဆုံးမှရေးမလို့ပါ မရေးတတ်တော့သူများတွေရေး
တာကို အတုခိုးပြီးရေးမလို့ပါပဲ ဒုတိယအကြိမ် Tag ခံရတော့ အားလုံးပြီးတာလဲမစောင့်နေတော့ပါဘူး
မရေးတတ်-ရေးတတ် နဲ့ စလိုက်ရပါပြီရှင် ။
တောင်ကြီး ကျွန်မကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြန်မာလူမျိုးရှားပါးပါတယ်
တရုတ်-တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ- နဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအနေများတဲ့နေရာလေးပါ
တောင်ကြီးရဲ့ ဒီဇင်ဘာဟာ တစ်ခြားမြို့တွေနဲ့မတူဘူးလို့လဲခံစားရပါတယ်-ကျွန်မနေထိုင်တဲ့အိမ်ကနေ
အရှေ့ဖက်တောင်ပေါ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ တောင်အားလုံးဟာ ပန်းနုရောင်သန်းနေပါတယ်
ချယ်ရီတွေရဲ့ အလှတစ်ခုပါပဲ ရွှေညောင်ကနေတောင်ကြီးတက်တဲ့ လမ်းနဘေး တောင်ကြီးရောက်ခါနီးရင်ဖြင့်
ဒါတွေကြောင့်လဲ တောင်ကြီးကို အမြဲကျွန်မအလွမ်းတွေပိုနေရပါတယ်ရှင် ။
အခုတော့ Rose နဲ့ Candy တို့ကဒီဇင်ဘာပိတ်ရက်အကြောင်းလေးကို Tag လိုက်တော့လဲ မေမေရယ်
သူငယ်ချင်းတွေ ရယ် လှပတဲ့ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ လုပ်နေကျလေးတွေကိုရေးပြရမှာပါ ---
Rose ရဲ့မေးခွန်းလေးတွေကို မှတ်မိသလောက်ဖြေလိုက်ပါ့မယ်နော်
*ခရစ်စမတ် ရောက်ခါနီးရင် စိတ်လှုပ်ရှား ပျော်ရွှင်မိပါသလား?
ရောက်ခါနီးလေ စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ပျော်ရွှင်ရပါတယ် -
*ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ကို ခရစ်စမတ် သစ်ပင်၊ decoration ornaments များနဲ့ အလှဆင်လေ့ ရှိပါသလား?
အမြဲမရှိပါ-တခါတလေ မြို့ပြင်ကိုကားကလမ်းကြုံရင်တော့ ထင်းရှုးပင်ခုတ်လာပေးလို့
Christmas Tree လေးတော့ အပျော်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်-ထင်းရှုးသီးတွေက မြို့ပြင်ထွက်ပြီးကောက်လို့ရနေလို့ပါ
*နှင်းတွေ အေးခဲနေတဲ့ နေရာကို သွားရောက်လည်ပတ်ချင်ပါသလား။ တကယ်လို့ နှင်းတွေကြားမှာ လက်ရှိနေထိုင်နေရင် နှင်းမပါတဲ့ ခရစ်စမတ်နဲ့ နှင်းဖြူဖြူတွေ ကျရောက်နေတဲ့ ခရစ်စမတ် ဘယ်အရာကို ပိုနှစ်သက်မိလဲ (ရွေးချယ်ခွင့် ရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့)?
နှင်းဖြူဖြူတွေ ကျရောက်နေတဲ့ ခရစ်စမတ် ကိုပိုပြီးနှစ်သက်မိပါတယ် -
*ခရစ်စမတ်ပိတ်ရက်ကို ဘယ်လို ဖြတ်သန်းချင်ပါသလဲ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ခရီးထွက်တတ်ပါသလား?
မေမေတို့က ခရီးထွက်ရတာကြိုက်လို့တခါတရံလိုက်ထွက်ရပါတယ် ကိုယ်တိုင်ကတော့မကြိုက်ပါ -
*ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေကို ဘယ်လို လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးဖြစ်လဲ?
လက်ဆောင်တွေလဲကြပါတယ်-အစုံပါပဲ တိတိကျကျတော့မမှတ်မိပါဘူး -
*ခရစ်စမတ်မှာ အမှတ်တရလေးတွေ ရှိခဲ့ဖူးရင် ပြောပြပေးပါ?
အိမ်ရှေ့ကမီးပုံနားမှာ သူငယ်ချင်းတွေဝိုင်းဖွဲ့ပြီး အစားစား သောက်ကြပါတယ်
*နှစ်သစ် အကြိုညမှာ ဘယ်သူတွေနဲ့ အတူတူ ရှိနေချင်ပါသလဲ?
အခု အိမ်ထောင်ကျပြီး ကိုယ့်အမျိုးသားရဲ့ ဘေးမှာဖြတ်သန်းချင်ပါတယ်(မေ့ကိုတော့လွမ်းနေမိတယ်) -
*New Year Eve မှာ countdown ပြုလုပ်လေ့ ရှိသလား။ အမှတ်တရများ ရှိခဲ့ရင် ပြောပြပေးပါ?
ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လေ့ မရှိခဲ့ပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေ လုပ်တာကြည့်ပြီး ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးပါတယ် -
*နှစ်သစ်ကို ကုန်ဆုံးစေချင်တဲ့ နေရာသီးသန့်မျိုး ရှိပါသလား။ အလည်အပတ် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ ဖော်ပြပေးပါ?
ထူးထူးခြားခြား မရှိခဲ့ပါ -
*နှစ်သစ်မှာ New Year Resolution အနေနဲ့ ဘာတွေ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး အကောင်အထည် ဖော်တတ်ပါသလဲ?
အဲတာလဲ မလုပ်ခဲ့ပါ -
*နှစ်တစ်နှစ် ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အပေါ် လွမ်းမောတသတာမျိုး၊ အချိန် မကုန်စေချင်တာမျိုး ရှိတတ်ပါသလား?
ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အချိန်တွေကိုမလွမ်းတတ်ခဲ့ပါ - ရှိနေတဲ့ အချိန်ကိုပဲ အပြည့်အ၀ အသုံးချနေရတာလဲ
*နှစ်သစ်ရောက်ရင် ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေတွေကို ပို့စ်စကဒ်များ၊ e-card များနှင့် နှုတ်ခွန်းဆက်တာမျိုး ရှိပါသလား?
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂-၃ နှစ်ကရှိခဲ့ပါတယ် ယခုလက်ရှိမှာတော့မအားလပ်တာများနေတာမို့ မေမေနဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို ဘာမှ မပို့နိုင်ခဲ့ပါ -
* ထပ်ပြီး ဖြည့်စွက် ရေးချင်တာက?
ထပ်ရေးချင်တာကတော့ ဒီလိုရက်တွေမှာ မိသားစုရယ်ချစ်ရတဲ့ ဘ၀ကြင်ဖော်ရယ် သူငယ်ချင်းတွေ
အားလုံးနဲ့အတူတကွ ရှိနေချင်ပြီး မနက်စာ-နေ့လည်စာ-ညစာ- ညလယ်စာ တို့ကိုတူတူစားချင်ပါတယ် -
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုလဲ လက်ဆောင်လေးတွေပေးချင်ပါတယ် သူဆီကလဲ (တန်ဖိုးအဓိကမဟုတ်)
တစ်ခုခု အမှတ်တရလေးတွေ လိုချင်ပါတယ်ရှင် (စကားလက်ဆောင်ပန်းလက်ဆောင်လေးတွေပေါ့) -
ဒီလောက်ပါပဲနော် Rose ရယ် ကျေနပ်နော်- candy ရေ ရေးလိုက်ပါပြီနော် - ဘလော့ရေးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို
ဂျက်က ခင်ခင်မင်မင် နဲ့ သံယောဇဉ်ရှိပါတယ်ရှင် တစ်ယောက်တစ်မျိုးတော့ အရေးကောင်းတဲ့သူတွေပါပဲ
အချိန်ရလျှင်ရသလို လာလည်ပေမယ့်မ၀င်ဖြစ်တဲ့ အိမ်များရှိခဲ့ရင် မိဂျက်ကိုနားလည်ပေးပြီး
ခွင့်လွတ်ပါလို့ အားလုံးပျော်ရှင်စရာကောင်းတဲ့ နှစ်သစ်လေးကိုချစ်ရသူတွေနဲ့ တူတူလက်တွဲ
ပြီးဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့----- ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းရင်နဲ့ နိဂုံးချုပ်ပါရစေလို့ ။
Rose နဲ့ Candy ကသူငယ်အားလုံးနီးပါးကို တက်ဂ်ထားပြီးသားဖြစ်နေလို့ jasmine ဘယ်သူ့ကိုမှ
ထပ်ပြီးမရေးခိုင်းတော့ပါဘူးနော် မရေးရသေးတဲ့သူများလဲ ရေးနိုင်ပါစေလို့ မျော်လင့်နေပါတယ် ။
၀ီစကီ တစ်ခွက်ရဲ့ အချစ်
Posted by စံပယ်ချို | Tuesday, December 20, 2011
သူငယ်ချင်းအများစုလဲ မူးကျမည်ဟု အရှိန်ယူနေပါ၏
2012 ကိုကြိုဆိုဖို့ သူငယ်ချင်းများအတွက် လှလှပပ ပုံ...
သူငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက် ( Merry Christmas)
နေဇော်လင်းမွေးနေ့ ဒီဇင်ဘာ (၇) ရက်နေ့အတွက်ဆုတောင်း
စာချစ်သူ ကဗျာချစ်သူ များအားလုံးအတွက် Sweet Decembe...
ပေါက်ကရ ဒီဇင်ဘာ အလွမ်း